Halyeey kooxda Bayern Munich ah oo kula taliyay Antoine Griezmann inuu isaga tago Barcelona – Gool FM
(Yurub) 26 Okt 2020. Halyeeyga kooxda Bayern Munich Bixente Lizarazu ayaa kula taliyay weeraryahanka reer France ee Antoine Griezmann inuu dhaqso uga tago naadiga Barcelona.
Ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka Faransiiska Antoine Griezmann kuma uusan soo bilaaban shaxdii Barcelona kulankii Real Madrid ee El Clásico, sabtidii la soo dhaafay, kaasoo ku soo idlaaday 1-3, wuxuuna badel ku soo galay 9-kii daqiiqo ee ugu dambeysay ciyaarta.
Xiddigii hore kooxda Bayern Munich iyo xulka qaranka France ee Bixente Lizarazu ayaa wareysi uu bixiyay wuxuu kula taliyay Griezmann waxaana hadaladiisa ka mid ahaa:
“Waxaan u maleynayaa inuu yahay ciyaaryahan cajiib ah. Isagu wuxuu ku fiican yahay xulka qaranka, laakiin isagu kuma ahan sidaas kooxda Barcelona, ​​tanina waa dhibaato dhab ah”.
“Wuxuu ugu biiray kooxda Barcelona si uu u helo khibrad xiiso leh, isla markaana uu kaga garab ciyaaro Lionel Messi, laakiin nasiib daro ma jiro xiriir wanaagsan oo ka dhexeeya labadooda”.
Si kastaba ha ahaatee, 29 jirkaan ayaa ku soo biiray kooxda Barcelona xagaagii 2019, isagoo kaga soo biiray naadiga Atletico Madrid aduun dhan 120 milyan euro, laakiin kaliya wuxuu dhaliyay 15 gool, 53 kulan uu ku ciyaaray maaliyada Blaugrana, halka uu ka caawiyay 4 gool kale saaxiibadiis.
Lizarazu ayaa xusay in qiyaastii 18 bilood ay ka soo wareegtay imaatinka Antoine Griezmann ee kooxda Barcelona, laakiin xaalladu, si fiican uguma socoto isaga, wuxuuna yiri:
“Waa inuusan ka labalabeyn inuu baxo illaa iyo inta uusan boos ka heleyn kooxda”.
‘Waxaan hubaa inuusan boos heli doonin dhab ahaantii, maadaama uusan hada kaddib aqoon sida kubadda cagta loogu ciyaaro maaliyada Barcelona, waxayna arrinta la xiriirtaa dhibaato ka jirta isku kalsoonaanta ciyaaryahanka”.